“ ဘ၀ကို အသစ်တဖန် ပြန်နေရဦးမည်ဆိုလျှင် … ” ~ ITmanHOME
02:16 ကောင်းနိုးရာရာ No comments
“ ဘ၀ကို အသစ်တဖန် ပြန်နေရဦးမည်ဆိုလျှင် … ”
တစ်နေ့တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကမေးသည် ။ ဘ၀ကို အသစ်တဖန် ပြန်နေရလျှင်ဘာတွေ အပြောင်းအလဲလုပ်မည်လဲ ဟူ၍ …။
" ဟင့်အင်း " ဆိုပြီးမှ ခေါင်းထဲ စဉ်းစားစရာတွေ ပေါ်လာသည် ။
အကယ်၍ ဘ၀ကို အသစ်တဖန် ပြန်နေရဦးမည်ဆိုလျှင် ………..
• စကားနည်းနည်းပဲ ပြောမည် ၊ သူများပြောတာများများ နားထောင်မည် ။
• အိမ်က ကော်ဇောတွေ စွန်းထင်းပေကျံနေပြီး ဆိုဖာက ဟောင်းနွမ်းမှေးမှိန်နေမည်ဆိုလျှင်လည်း မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကိုတော့ ညစာဖိတ်ကျွေးဦးမည်။
• အသန့်အပြန့်ထားသည်ဆိုသော ဧည့်ခန်းထဲမှာလည်း ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်
စားချင်စားမည်။ တစ်ယောက်ယောက်က မီးလင်းဖိုမှာ မီးမွှေးချင်သည်ဆိုလျှင်လည်း အမှုန်အမှိုက်တွေဖြင့် ညစ်ပတ်မှာ သိပ်မစိုးရိမ်တော့ ။
• အဘိုးက သူငယ်ငယ်တုန်းက အကြောင်းတွေ အရှည်ကြီး လျှောက်ပြောနေလျှင်လည်း
• နွေရာသီနေ့လည်ခင်း ကားစီးသွားသောအခါ ဖြီးသင်ပြီး စပရေးဖျန်းပြီးစ
ဆံပင်တွေ ပျက်ကုန်မှာမို့ ကားမှန်တွေ အတင်းအကျပ်တင်ထားခိုင်းတာမျိုးမလုပ်တော့ ။
• နှင်းဆီပွင့်ပုံ ဖေါ်ထားသည့် ပန်းရောင်ဖယောင်းတိုင်ကို စတိုထဲတွင် အရည်ပျော်မသွားမီ မီးထွန်းပစ်မည် ။
• မြက်ခင်းက ပေကျံမှာတွေ စိုးရိမ်မနေဘဲ ကလေးတွေနှင့်အတူ ရောထိုင်ပစ်မည် ။
• ရုပ်မြင်သံကြားထက် တကယ့်ဘ၀တွေကို များများ ပိုကြည့်ကာ ငိုစရာရှိတာငို
• မိသားစု ထမ်းပိုးနေရသည့်တာဝန်တွေကို ယခုထက်ပိုပြီး မျှဝေထမ်းဆောင်မည် ။
• သို့သော် နေမကောင်းသည့်အခါ အိပ်ရာထဲ လှဲနေမည် ။ ကိုယ်သာ ထမလာလျှင်
တစ်လောကလုံး ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတော့မည် ဆိုတာမျိုး အထင်ရောက်မနေတော့ ။
• ပစ္စည်းတစ်ခုကို တကယ်အသုံးတည့်နိုင်သည် ၊ အညစ်အပေခံသည် ၊
တစ်သက်လုံးသုံးနိုင်သည် ဆိုရုံမျှဖြင့် ၀ယ်မည် မဟုတ်တော့ ။
• ကိုယ့်ကို တစ်ယောက်ယောက်က ရန်လာစသည့်အခါ၌လည်း …ဒေါသတကြီး ချက်ချင်း
လက်တုံ့ပြန်မည့်အစား ကိုယ့်ကို ရန်စသည့် အကြောင်းရင်းကို ခေါင်းအေးအေးဖြင့် အချိန်ယူစဉ်းစားမည် ။
• အငြိုးအတေးတွေ ၊ လက်တုံ့ပြန်ခြင်းတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှားကာ “
အကောင်းမြင်စိတ် ” ဖြင့် သူ့ဘက်ကို ကြည့်ပေးလိုက်မည် ။
• ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ကောင်းထားကာ ဆောင်ရွက်လိုက်သော အမှုတစ်ခုမှ
ထပ်တူညီသော အသီးအပွင့်တွေ ပွင့်မလာဘဲ ကံကြမ္မာတရားက ကျီစယ်လှည့်စားသည့်အခါ
ညွတ်ပျောင်းနင့်နဲစွာ ခံစားတတ်သော စိတ်၏ အစွဲအလမ်းကြီးမှုကို ကိုယ့်ဘာသာ
အပြစ်တင်မနေဘဲ ပြုံးနိုင်အောင် ကြိုးစားမည် ။
• “ အိုင် မစ် (စ် ) ယူ ” တွေ ၊ “ အိုင် (မ) ဆောရီး ” တွေ ယခုထက်
အများကြီး ပိုပြီး ပြောမည် ။
• တိုတောင်းလှသော ဘ၀ခရီးကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာပဲ ဖြတ်သန်းသွားမည် ။
• ပြီးတော့ အရေးအကြီးဆုံးက …. …. …..
• အကယ်၍ စောစောကပြောခဲ့သလို သည်ဘ၀ကို နောက်တစ်ကြိမ် တကယ်သာ
နေခွင့်ရဦးမည် ဆိုပါလျှင် မိနစ်တိုင်း မိနစ်တိုင်းကို အမိအရ ဖမ်းဆုပ်ကာ
သေသေချာချာ မှတ်မှတ်ရရ ကြည့်မည် ၊ ပြည့်ပြည့်၀၀ နေမည် ၊ ပြီး
ဘယ်တော့မှလည်း …. ပြန်ပေးမည် မဟုတ်တော့ ။
Translated by *Saya Phay Myint ...
From *Chicken Soup for the Soul*
P.S ... Some Lines are added as additions :)* !
Credit - laypyaychanchan